Uterqüe na-ewetara A la Fresca, ụlọ obibi ọhụrụ ya SS21 | Bezzia
Maria onyekwere | 07/04/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Na nso nso a Uterqüe gosipụtara «A la Fresca», ederede ọhụrụ nke gunyere atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ maka oge opupu ihe ubi-oge ọkọchị 2021 nke anyị ka malitere. Amụma nwere mmadụ dị iche iche na-egosipụta mkpebi siri ike na nchekwube.
Ihe ọdịnihu na ihe ncheta nke iri asaa na-agbakọta na nchịkọta akụkọ ọhụrụ a nke anyị nwere ekele maka usoro atọ. Nke mbụ jiri oji na ọcha maka ọdịdị na nkọwa dị iche iche. Nke abuo etinye aka na ihe okike na nkewa nke geometric. Na nke atọ?
1 Nwa na ọcha
2 Foto ndị dị na foto
3 Agba na ụkpụrụ mkpuchi
Nwa na ọcha
Ngwakọta nke akwa na nkọwa ihe omuma nke sitere na ihe di iche iche nke okike kpakpando na uwe ojii na oji nke ulo ohuru ohuru. Na Bezzia anyị nwere mmasị karịsịa na nchikota nke ejiji akpụkpọ anụ na eyelets na akwa akwa akwa. Mana anyị enweghị ike ịkọwa uwe ndị ahụ kwa, n'ihi na ịchọ mma ha mara mma.
Foto ndị dị na foto
Achọpụtaghị mpempe akwụkwọ Checkered n'etiti amụma ọhụrụ Uterqüe. Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị na anyị kwesịrị ikwu maka mbipụta checkered, ebe ọ bụ na anyị na-ahụkwa agba ọhụụ ọzọ nwere agba abụọ n'etiti amụma: houndstooth. A na-ejikọta ha abụọ site na uwe elu nke poplin na uwe elu nwanyị, uwe elu owu na akwa ọsụsọ ... Na ihe a niile na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma, acha anụnụ anụnụ na lilac.
Agba na ụkpụrụ mkpuchi
Ihe okike na nchekwube bu uzo kachasi egwu nke ulo obibi akwukwo A la Fresca. Ọ bụ ezie na ha pere mpe, zig zag Mbipụta na-enwu gbaa na agba emela nke oma. Ọbụna obere mgbe ejikọtara ha na ọnyá iji mepụta uwe naanị ndị kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwanyị nwere mkpebi siri ike ma nwee ntụkwasị obi.
Uwe ndị kpakpando na nchịkọta akụkọ a abanyelarị na akwụkwọ Uterqüe na ndị na-agaghị eme n'oge na-adịghị anya. Yabụ ọ bụrụ na ilela uwe anya, echekwala nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga-anọ na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Uterqüe na-ewetara A la Fresca, ụlọ obibi akwụkwọ SS21 ọhụrụ ya